December 2021 - Newposts
December 31, 2021 newposts2021 0
လာမယ့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့ဟာ စနေနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့အတွက် နေ့နံအလိုက် နှစ်သစ်အကြို အထူးယတြာအစီအရင်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီယတြာကို နှစ်သစ်အစ ဇန်နဝါရီ (၁) ရက်မှာ စီရင်နိုင်ခဲ့ရင် တစ်နှစ်လုံး ဘေးကင်းရန်ကွာပြီး လိုရာပြည့်စေဖို့ အထောက်အကူ ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တနင်္ဂနွေသားသမီးများ […]
Happy New Year ဒီဇငျဘာ(၃၁)ည တကယျတော့ မွနျမာလူမြိုးတှနေဲ့တိုငျးရငျးသားတှေ အတှကျတော့ရငျနာစရာအကောငျးဆုံးညတဈည
Happy New Year ဒီဇင်ဘာ(၃၁)ည တကယ်တော့ မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေ အတွက်တော့ရင်နာစရာအကောင်းဆုံးညတစ်ည ရင်နာစရာအကောင်းည ဒီဇင်ဘာ(၃၁)ညဆိုရင် တစ်ကမ္ဘာလုံးHappy New Yearလို့ဝိုင်းအော်ပြီး ပျော်ကြတဲ့ညပေါ့ဗျာ ဒါပေမဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးတွက်ပျော်စရာအကောင်းဆုံး ညတစ်ညဆိုပေမဲ့ ကျွန်တော့်မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေ အတွက်တော့ရင်နာစရာအကောင်းဆုံးညတစ်ညပါဒါကိုတစ်ချို့လူတွေ သိကြတယ်သိသိကြီးနဲ့သူ့များကHappy New Yearလို့အော်တိုင်း လိုက်အော်ပြီရင်နာစရာအဖြစ်ပျက်တွေကိုမေ့ထားကြတယ် တချို့ကြတော့မသိကြဘူးသူ့အော်တိုင်းလိုက်အော်ကြတယ် တကယ်တော့ဒီဇင်ဘာ(၃၁)ညဆိုတာကျွန်တော့်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကို အင်္ဂလန်ဘုရင်မကြီးထံနှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးတဲ့ညပါ ကျွန်တော့်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးတိုင်းတပါးကျွန်စရောက်ပြီးရင်နာစရာ […]
မုံရှာကပွညျသူမြား ညနေ(၆) ကြျောတာနဲ့ သတိထားကွပါ…
ယနေ့ နှစ်သစ်ကူး ညနေ(၆)နာရီကျော်ပါက အသက်အန္တရာယ်အတွက် အာမမခံကြောင်း စစ်ကောင်စီခြိမ်းခြောက် မုံရွာတွင် နှစ်သစ်ကူးနေ့ ညနေ ၆ နာရီကျော်လွန်ချိန် အစစ်ဆေးမခံပါက အသက်အန္တရာယ်အာမ မခံဟု စစ်တပ်က စာရွက်ဝေ ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ စစ်ကောင်စီက ယနေ့ဒီဇင်ဘာ၃၁ရက်နေ့ နှစ်သစ်ကူးနေ့ […]
မီးပူဖင်မှာ ကပ်နေတဲ့ဂျီး(ချေး)တွေကို ဒီနည်းလေးနဲ့ အလွယ်တကူဖယ်ရှားလိုက်ပါ
မီးပူဖင်မှာ ဂျီးတွေတက်နေလား မပူပါနဲ့။ ပါရာစီတမော့ (၂) ပြား ရှိရင် လွယ်ကူပါတယ်ဗျ လက်တွေ့ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။ ဂျီးတွေပေနေတဲ့ အပေါ် မှာ ဆေးပြားလေး တင်ထား၊ မီးပူကို အပူနည်းနည်းပဲထား၊ ခဏနေ အ ရည်ပျော်ကျကုန်ပြီး၊ တစ်ရှူးအကြမ်းလေးနဲ့ ပွတ်လိုက်ရင် မီးပူမှာ ကပ်နေတဲ့ ဂျီးတွေ […]
ကြိုကျထီးဆောငျးဆရာတျောမှ စဈတိုငျးမှူးဘဝကတညျးက ကွိုတငျဟောခဲ့တဲ့ မငျးအောငျလှိုငျရဲ့ အနာဂါတျလမျးဆုံး
မအလ စစ်တိုင်းမှုးဘဝတုန်းကထွက်ရပ်ပေါက် ကျိုက်ထီးဆောင်းဆရာတော်ကိုဖူးတော့ ဆရာတော်က မအလရှေ့ရေးကို ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားပြီးသား “ယခုလက်ရှိရာထူးနေရာရဲ့ အမြင့်ဆုံးနေရာထိရောက်မယ် လောဘထပ်မကြီးဖို့ ရသင့်တာထက်ပိုလိုခြင်ရင် ပျက်စီးခြင်းတွေကြုံရမယ် နောက်ဆုံး မိမိနေရပ်ကိုစွန့်ခွာပြီးဇီဝိန်ချုပ်လိမ့်မယ် ထွက်ပြေးရပါက တရုတ်ကိုမသွားပါနဲ့ရုရှားကိုသွားပါလို့ “ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားပြီးသားပါဒါကိုဆရာတော်ရဲ့တပည့်တစ်ယောက်က ပြန်လည်ဝေမျှထားတာပါ။ မအလဟာ စစ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးစစ်ဦးစီးချုပ် လည်းဖြစ်ပြီးသွားပြီ ဒါကိုတောင်မတင်းတိမ်နိုင်ပဲ လောဘတတ်ပြီး သမ္မတရာထူးတောင်းတယ်။မပေးတော့ အာဏာသိမ်းတယ်။ အဲ့ဒီမှာမအလ […]
လှမျးတာပေါ့ မွဖွေူလေးကိုငျပီး ကလေးတှနေဲ့ စာသငျခနျးထဲ နရေတဲ့အခြိနျကိုအမှောငျထဲ
လွမ်းတာပေါ့ မြေဖြူလေးကိုင်ပီး ကလေးတွေနဲ့ စာသင်ခန်းထဲ နေရတဲ့အချိန်ကိုအမှောင်ထဲ အားလုံး စု ထိုင်နေရချိန်မှာတစ်ကိုယ်စာ အပေါက်ဖောက်ပြီး အလင်းမရချင်ပါနဲ့ သာ တူတူ နာတူတူတစ်ယောက်လက်နဲ့ တစ်ရိပ်မိုးဖို့လိုသလိုတစ်ယောက်အခက် တစ်ရွက်မချိုးဖို့လည်း လိုတယ်. စည်းချက်လည်း မညီ ဗုံသံလည်း မပီဘဲနဲ့ ဘယ်အောင်စည်က ထ […]
ကားတစ်စီးကို ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အချက်(၁၀)ချက်
ကားတစ်စီးကို ကိုယ်တိုင်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အချက်(၁၀) ချက် ကိုရွေးချယ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ၁။ အင်ဂျင်ဝိုင်ကို စစ်ဆေးလဲလှယ်ပါ။ အင်ဂျင်ဝိုင်နဲ့ Filter ကို ပုံမှန် စစ်ဆေးပြီး အသစ်လဲပေးတာက အင်ဂျင်သက်တမ်းကို ကြာရှည် စေပါတယ် ၂။ တစ်နှစ် ကို တစ်ကြိမ် ရေတိုင်ကီနဲ့ […]
လကျသညျး၊ခွသေညျးညှပျခွငျးကို အမှုမဲ့အမှတျမဲ့ မထငျလိုကျပါနဲ့
လက်သည်း၊ခြေသည်းညှပ်ခြင်းကို အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ လောကီပညာအရ လာဘ် မပိတ်အောင် လက်သ အကြောင်းသင့်တဲ့ ရက်စွဲများ အကြောင်း ဘယ်နေ့မှာ လက်သည်း ခြေသည်း ညှပ်သင့်လဲ? ဘယ်နေ့မှာ လက်သည်း ခြေသည်းညှပ်ရင် ဘာအကျိုးရသလဲ… ( လောကီ ပညာထဲက သိစရာ ) […]
အိန္ဒိယသူတွေ အသုံးပြုတဲ့ ဆံပင်အရှည်မြန်စေတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်နည်းလမ်းများ အိန္ဒိယသူအများစုဟာ ဆံပင်မည်းနက်သန်စွမ်းပြီး ဆံသားကောင်းမွန်ကြတာကို ဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေမှာ တွေ့ဖူးကြ မှာပါ။ အခုဖော်ပြပေး မှာကတော့ အိန္ဒိယသူတွေရဲ့ ဆံပင်သန်စွမ်းပြီး အရှည်မြန်စေဖို့အတွက် အသုံးပြုကြတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ကြက်ဥအနှစ် ဆံသားအားဖြည့်ပေးဖို့ အတွက် အကောင်းဆုံး သဘာဝ […]
December 30, 2021 newposts2021 0
ညဘက် ဖုန်းကို ခေါင်းအုံးဘေးချအိပ်တတ်သူများအတွက် ဆိုးကျိုးများ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက်မို့ အားလုံးကို ဗဟုသုတ ရစေဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီးသည့် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတစ်ခုကို မိတ်ဆွေများအတွက် မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီခေတ်မှာ ဟန်းဖုန်းများ ပေါများစွာ ပေါ်ပေါက်လာပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသူ လူတိုင်းနီးပါး အသုံးပြုလာနေကြပါပြီ လူအများဟာ အိပ်ယာဝင်ခါနီးမှာ အများဆုံး အသုံးပြုနေကြပြီး ခေါင်းအုံးအနားမှာပဲချထားကာ […]